Maxay tahay sababta dil wadareedka New Zealand uu u yahay Dhibaatada Argagixisada Mareykanka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Maxay tahay sababta dil wadareedka New Zealand uu u yahay Dhibaatada Argagixisada Mareykanka?
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • Crime • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiiska Niyuusiilaan macnihiisu waa qurux aan la qiyaasi karin, soo jiidasho leh, oo ay ka buuxaan xayawaano fara badan, dadka ka walaacsan deegaanka, iyo ido badan.
Dalkan waxaa shalay laba jeer weeraray argagixiso cadaan ah oo dishay 49+ qof oo aan waxba galabsan iyagoo masaajid ku cibaadeysanaya.
Ninka wax toogtay ee New Zealand ayaa ugu yeeray Donald Trump 'astaan ​​aqoonsiga cad' markii uu dilay 49 qof. Waxaa lagu soo oogi doonaa dil wadareed maxkamada New Zealand Sabtida.
Weerarku wuxuu dhigayaa in Mareykanku uu aad ugu badan yahay barta dhexe ee ujeeddada uu qofka wax dilay u lahaa inuu ku dilo dilkan ballaaran ee ka dhacay New Zealand oo nabad ah.
In kasta oo ay ku jirto dhinaca fog ee adduunka kana soo horjeedda meelaha ay ka soo jeedaan qarannimada cad, haddana weerarkii argagixiso ee laba-geesoodka ahaa ee xag-jir caddaan ahi wuxuu muujiyey in qaranna uusan ka badbaadi karin awoodda halaagga ah ee xag-jirrada caddaanka dilaa ah.
Natiijada waa ugu yaraan 49 qof ayaa dhimatay. Ururada islaamiga ah ee daafaha aduunka waxay wada cambaareynayaan weerarka wadaadka kaniisada iyo hogaamiyaasha aduunka.
Aniga iyo Michelle waxaan tacsi u diraynaa dadka reer New Zealand. Waxaan la murugoonaynaa adiga iyo bulshada muslimiinta ah. Dhamaanteen waa inaan ka hortagnaa nacaybka noocyadiisa kala duwan, ”ayuu madaxweynihii hore ku soo qoray Twitter-ka. Tani waxay ahayd qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama.
Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada (si ula kac ah looma xiriirin), toogashada New Zealand wuxuu ku dhiiri gelinayaa dhiirigelintiisa ku saabsan "beddel" - isla ereyga ay ku baaqeen socod-barayaashii Nazi ee Charlottesville ee Trump ku tilmaamay "dad wanaagsan." Ninka wax toogtay wuxuu ugu yeeray socdaalka "xasuuq cad."
In kasta oo goobta toogashadu ka dhacday, haddana Mareykanku wuxuu ku yaal bartamaha barnaamijka. Ninka wax toogtay wuxuu ku bixiyaa heshiis aad u badan 74-kiisa bog isagoo ka hadlaya "hanjabaadaha kuliyada doorashada" iyo rabitaankiisa ah inuu "dhammeeyo dheriga dhalaalaya" adoo "balkanis" ka dhigaya Mareykanka "oo ay weheliso siyaasad, dhaqan iyo, ugu muhiimsan, khadadka jinsiyadaha." Hadalkiisa, wuxuu ku celceliyaa weedho iyo mawduucyo ka soo jeeda Trump iyo waddaniyiinta caddaanka ah ee Mareykanka, isagoo diiradda saaraya Wax ka beddelka Labaad oo ah aasaaska koowaad ee dhaqanka Mareykanka. Rasaasta ayaa sidoo kale tuurtay weedho garabka midig oo caan ah, isaga oo ka walwalsan in "canshuurtu tahay xatooyo" dooddiisa "isbeddelka dadka" ee Texas taas oo u horseedi doonta caddaanka inay bilaabaan dagaal sokeeye.
Raga toogashada ah waxay ku oranayaan kala qeybinta Mareykanka iyadoo loo marayo qowmiyado isir ah waxay si isdaba joog ah uga hadlayaan muujinta. Ninka wax toogtay wuxuu sheegayaa inuu si ula kac ah u doortay inuu adeegsado hubka halkii uu ka isticmaali lahaa bambooyin si gaar ah uu ugu abuuro xanaaq badan oo ku saabsan rabshadaha qoryaha isagoo rajeynaya inuu dhiirrigeliyo dagaalka ku saabsan Qodobka Labaad ee Wax ka beddelka iyo kaxeynta marinka Mareykanka.